Netatmo Tongasoa, fanadihadiana ary hevitra | Androidsis
Ny mety hisian'ny domody ny tranonay dia lasa zava-misy akaiky kokoa isan'andro noho ny mpanamboatra toa an'i Netatmo izay manome vahaolana feno amin'ny vidiny mirary. Iray amin'izany Netatmo Welcome, fakantsary fanaraha-maso izay mahay manavaka ny olom-pantatrao amin'ny mpiditra tsy fantatra.
Efa nomenay anao ny anay fahatsapana voalohany tamin'ny andiany farany an'ny IFA tany Berlin, Fa izao dia izao ny fotoana hanaovana fanadihadiana mahavariana kokoa momba ny vokatra iray izay nanaitra ahy tamim-pifaliana noho ny kalitaony sy ny fahafahany. Tsy avelako intsony ny fotoana farany avelako anao miaraka aminy Fanadihadiana fakan-tsary momba ny fanaraha-maso Netatmo.
1 Netatmo Welcome dia manana endrika endrika manintona sy maoderina
2 Fametrahana Netatmo Tongasoa ao an-trano, dingana voalohany
3 Netatmo Tongasoa, ireto no fampidiranao
3.1 Netatmo Tongasoa ao amin'ny efitrano mamiratra
3.2 Netatmo Tongasoa amin'ny maody fahitana amin'ny alina maizina tanteraka
4 Ny fomba fiasan'ny rafitry ny fanekena tarehy amin'ny Netatmo Welcome
5 Fampiharana tena feno sy mora ampiasaina
6 Tags, izao no fiasan'ny sensor sy ny varavarankely
9 Isa manohana
10 Hevitra manohitra
Netatmo Welcome dia manana endrika endrika manintona sy maoderina
Alohan'ny hiresahana ny famolavolana dia lazao fa ao anaty fonosana nalefan'ireo bandy avy any Netatmo ahy, ny fakantsary fanaraha-maso horonantsary ankoatran'ny sensor, ny Netatmo Tags izay miasa ho famenon'ny Netatmo Welcome ary izany dia mamantatra raha misy varavarankely na varavarana misokatra. Amidy isan-karazany ity fonosana ity, araka ny hevitro avy eo.
Atombohy amin'ny Volavola fakan-tsary Netatmo Tongasoa Satria, araka ny efa hitanao, ny marina dia ny endriny vita amin'ny varingarina miaraka amina firakotra volamena vita amin'ny volamena izay mahatonga ny fakan-tsary ho tsy mampino. Ary tena premium.
Rehefa mandray azy manolotra fikitika sy fahatsapana faharetana tsara, izay azoko hamafisina koa tsy misy fisalasalana: nandinika ilay fakantsary fanaraha-maso aho nandritra ny iray volana ary mila milaza aho fa tena mahatohitra fianjerana ny Netatmo Welcome; Manana saka milalao aho izay mankafy ny fitsapana ny gadget rehetra miditra ao an-trano ary ny fakantsary dia nilatsaka intelo tamin'ny haavon'ny 1.5 metatra nefa tsy nisy fahasimbana.
Miaraka amin'ny haben'ny 15.5 cm ny haavony ary 4.5 cm ny savaivony kely ny fakan-tsary apetraka na aiza na aiza ao an-trano, eny fa na eo ambony talantalana aza, satria ho tafiditra mora foana.
Eo aloha dia toerana misy an'izy ireo ny solomaso izay manana sahan'asa lehibe 130 degre, ankoatry ny LED kely hazavana rehefa mifandray mandritra ny segondra vitsy, ankoatry ny LEDs infrared izay hamela ny fakantsary fanaraha-maso horonan-tsary Netatmo hampiasaina na dia ao anaty aizina tanteraka aza.
Samy madio ny faritra ambony sy ambany amin'ny fakantsary, raha any aoriana kosa dia mahita seranana telo isika: amin'ny lafiny iray, a slot micro SD card, seranan-tsambo USB micro hampifandray ny Netatmo Welcome ary port Ethernet farany hampifandray ilay fitaovana amin'ny router.
Eto no nahitako ny hany nefa amin'ny endriny: ny zava-misy mila fantsom-pifandraisana ilay fakan-tsary hamahana ny ampahany aminy amin'ny hatsarany tonga lafatra, ankoatry ny famerana ny toerany amin'ny alàlan'ny filana outlet akaiky, na ny fampiasana tadin'ny fanitarana. Mazava ho azy fa tsy maintsy tsiahivina fa, na eo aza ny mampiavaka azy manokana ara-teknika, ny fakantsary Netatmo Welcome dia sarany latsaky ny 200 euro ka any amin'ny toerana iray dia tsy maintsy nahenany ny vidiny.
Ary farany te-hanome hevitra amin'ny antsipiriany iray aho: lasa mafana be ilay fitaovana aorian'ny fampiasana maharitraTsy handoro tananao io fa natahotra aho tamin'ny voalohany sao hanimba. Ao amin'ny torolàlana dia mampitandrina izy ireo momba izany ary milaza fa tsy misy olana lehibe, saingy te-hanontany aho mba hahalalako ny anton'io fahana be io.
Belén Andrada, avy amin'ny maso ivoho ny serasera an'ny orinasa dia nanazava tamiko fa ara-dalàna tanteraka izany satria ny Netatmo Welcome dia miasa amin'ny algorithma sarotra be ary manohy manohy mombamomba ny fampahalalana, ka ara-dalàna raha manafana azy io. Mba tsy hampitombo ny endriny, Netatmo Welcome dia tsy manana mpankafy na outlet ivelany, fa ny alimina anodized izay manarona azy dia mihetsika toy ny filentehan'ny hafanana, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny hafanana be loatra Netatmo ianao. Mazava ho azy fa tsara kokoa ny misoroka ny tara-masoandro mivantana mba hiantohana ny fiasan'ny fitaovana mety.
Fametrahana Netatmo Tongasoa ao an-trano, dingana voalohany
Ny fakantsary dia tena tsara sy izany rehetra izany, fa ahoana no mampifandray azy? Ity dia iray amin'ireo zava-tsy ampoizina lehibe noraisiko hatramin'ny androny Rafitra plug and Play dia tena mora ampiasaina.
Mila manao fotsiny ianao apetraho ny fampiharana ofisialy Netatmo Welcome amin'ny fitaovana Android anao ary araho ireo dingana efatra angatahiny. Miaraka amin'ny fampiharana dia azonao atao ny manara-maso ny fakantsary amin'ny fotoana tena izy amin'ny fotoana rehetra, ankoatry ny fahazoana fampandrenesana raha miditra an-trano ny mpiditra anao, noho izany dia ilaina ny mifandray amin'ny fakantsary amin'ny Internet.
Ny fomba tena ahazoana aina dia amin'ny alàlan'ny Seranan-tsambo Ethernet, fa koa azonao atao ny mampifandray azy io amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao amin'ny fomba mora sy mora. Raha teo aho dia nanana olana tamin'ny fampifandraisana azy tamin'ny router-ko, efa nolazaiko taminao fa ny olana amin'ny router Ono, fa ny fampiharana dia nanolotra ahy ny fahafaha mampifandray ny Netatmo Tongasoa amin'ny tambajotran Wi-Fi ahy amin'ny alàlan'ny fidirana andiam-paritra toy izany toy ny adiresy IP ny router. Tsy naharitra dimy minitra nananganana azy aho. 2 ao amin'ny birao izay tsy nanana olana tamin'ny Wi-Fi.
Ity dia teboka iray izay tiako asongadina betsaka hatramin'ny nanandramako vahaolana hafa hifehezana ny tranonao ary ny marina dia tena manahirana tokoa ny mampandeha azy hiasa. Miaraka amin'ny Netatmo Welcome, tena mora ny raharaha.
Netatmo Tongasoa, ireto no fampidiranao
lafiny 45 x 45 x 155 mm
fakan-tsary Lensa 4 megapixel manolotra vahaolana 1920 x 1080 miaraka amin'ny fahitana amin'ny alina
Conectividad Wifi 802.11 b / g / n ary Ethernet
Color Mainty sy volamena
vidiny 187.76 euro amin'ny Amazon
Amin'ny taratasy dia manana fakantsary iray faran'izay feno izahay, saingy ahoana no fomba fiasan'ny Netatmo Welcome? Efa nolazaiko anao fa tena nahagaga ny gaga. Ary ho amin'ny tsara kokoa. Hanombohana amin'ny fakantsary fakantsary a fanapahan-kevitra mihoatra ny marina, manolotra sary maranitra ao anaty tontolo mirehitra mazava.
Ny antsipiriany iray tena tiako dia ny fakantsary Zoro fijerena 130 degre ka manarona tanteraka ny efi-trano feno tsy misy olana mamela anao hamantatra haingana ny endrik'olona miditra sy mivoaka ny trano.
Gaga aho tamin'ny kalitaon'ny sary tamin'ny maody alina. Ankehitriny dia hamela anao sary roa aho hahafahanao mampitaha, kanefa, amin'ny fiheverana fa ny andrana dia natao tao amin'ny efitrano mihidy ary tao anaty haizina tanteraka, tokony holazaiko fa ny kalitaon'ny Netatmo Welcome in Night Vision mode dia mihoatra ny ampy.
Iray amin'ireo mampiavaka an'i Netatmo Welcome ny fananany rafitra fanekena tarehy fa rehefa mandeha ny fotoana dia ho fantany ireo olona ao anatin'ny rafitrao ary hampitandrina izy ireo rehefa miditra ny olona miditra. Eny, miaraka amin'ny maody fahitana amin'ny alina dia manohy mamantatra tarehy tsy misy olana be loatra izy, antsipiriany iray mampiseho ny asa lehibe vitan'ny mpanamboatra.
Netatmo Tongasoa ao amin'ny efitrano mamiratra
Netatmo Tongasoa amin'ny maody fahitana amin'ny alina maizina tanteraka
Ny fomba fiasan'ny rafitry ny fanekena tarehy amin'ny Netatmo Welcome
Ny tanjaky ny Netatmo Tongasoa, ary nahoana namafa ny CES tany Las Vegas no rafitra eken'ny endrikao. Ary ny fakan-tsary dia mampitandrina antsika isaky ny mahita olona ao an-trano izy. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fakantsary fanaraha-maso horonan-tsary Netatmo raha oharina amin'ny vahaolana an'ny mpifaninana aminy dia izany Netatmo Welcome dia mahay manavaka azy ireo ary milaza aminao marina hoe iza no niditra tao an-tranonao tamin'ny alàlan'ny fampandrenesana.
Ho an'ity dia hampiasainay ny anao fampiharana feno, azo jerena ao amin'ny Google Play, ary tena mandeha ho azy izany. Raha vantany vao nametraka ny fakan-tsary izahay, araka ny fahitany ny olona mandalo, dia hamonjy fitenenana samihafa avy hatrany izy ary hanontany anay amin'ny alàlan'ny fampandrenesana hoe iza izy ireo hahafahanay mamorona mombamomba ny mpampiasa samihafa.
Ireo tahirin-kevitra rehetra ireo dia voatahiry ao anaty endrika voafina amin'ny mpizara an'ny orinasa. Ireo horonan-tsary sy sary nalaina dia ho voatahiry ao amin'ny memo Micro SD 8GB izay miaraka amin'ny Netatmo Welcome. Azontsika atao ihany koa ny tehirizina ao amin'ny kaonty Dropbox misy antsika, na dia te-hanatsotra ny fomba rehetra araka izay tratra aza aho, koa notehiriziko tao amin'ny karatra Micro SD ny vaovao rehetra. Ary raha heverina fa afaka mamonjy horonan-tsary 120 eo ianao dia manana maridre mihoatra ny ampy.
Raha ny amiko dia izahay olona telo ao an-trano ary ny rafitra dia naharitra dimy andro hahafantarana antsika. Raha vantany vao "nanao sonia" antsika Netatmo Welcome, tsy maintsy milaza aho fa mahatakatra tsara ny toetran'ny olona tsirairay avy ny fakantsary, manao fikambanana tonga lafatra. Tena antenaiko fa hiharatsy kokoa ny rafitra, tsy dia nitovy ny fahafahany mamantatra sy mitahiry endrika tsara toy izany, Netatmo Welcome dia nanaraka fanamarihana momba an'io.
ihany koa Ny rafitry ny fampandrenesana Netatmo dia azo alamina Azontsika atao ny mandefa azy ireo fampandrenesana amintsika rehefa miditra ao an-trano ny olona iray fa tsy eken'ny rafitra izany, rehefa miditra ny olona fantatra fa liana izahay hahafantatra hoe rahoviana izy ireo no tonga any an-trano ary rehefa mivoaka izy ireo (zavatra tena ilaina tokoa raha manana mpitaiza ohatra) ary azontsika atao koa ny manamboatra ny fakan-tsary hampitandrina antsika raha toa ka maty ny alarme na ny detector setroka.
Io dia mamela ianao ve no misafidy raha te hahazo fampandrenesana bebe kokoa na latsaka miankina amin'ny tsiro an'ny tsirairay.
Fampiharana tena feno sy mora ampiasaina
Araka ny efa nolazaiko, Ny fampiharana ofisialy Netatmo Welcome dia tena tsotra sy azo ampiharina. Mba hanaraha-maso ny fakantsarantsika dia azontsika atao amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny mpanamboatra na ny fampiasana ny fampiharana ofisialy azy. Eo am-piandohan'ireto andalana ireto dia namela anao horonan-tsary kely aho ahafahanao mahita ireo menus samihafa misy amin'ny fampiharana.
Asongadino izany Amin'ny tranga fitadiavana hetsika dia hanomboka hotehirizina segondra vitsy ny horonan-tsary alohan'ny hitrangan'ity hetsika ity.na, mifarana segondra vitsy aty aoriana. Mba hanomezana hevitra anao, raha misy miditra na miala amin'ny efitrano arahain'ny Netatmo Welcome dia maharitra 30 segondra ny salan'isa.
Ankoatra izany, samy miaraka amin'ny rindranasa Android sy amin'ny alàlan'ny tranokala Netatmo dia afaka jerentsika amin'ny fotoana tena izy ny zavatra noraketan'ilay fakantsary streaming mihaino ny feo. Amin'ity tranga ity dia misy ihany koa ny fanemorana kely ka ny efitrano fakan-tsary dia manana efitrano fandraisam-peo raha sendra misy miditra ny faritra manodidina azy, saingy andinindininy izay tsy manelingelina mihitsy.
Tags, izao no fiasan'ny sensor sy ny varavarankely
Ny fizarana farany tiako horesahina dia ny Tags, sensor kely izay amidy misaraka anaty fonosana telo ary manampy ny fakantsary Netatmo Welcome. Ireo sensor ireo dia manana sensor mihetsika ka, rehefa tafapetraka eo am-baravarana sy eo am-baravarankely isika dia mahazo fampandrenesana rehefa nosokafana.
Ny sensor dia mandeha tsara, ka toro-hevitra ny hampihenana ny fahatsapana mba tsy hampihetsika azy ireo amin'ny hadisoana noho ny fihozongozona be loatra Raha ohatra, ny varavarankely eo akaiky eo izay tsy misy fakan-tsary dia akatona an-keriny na fiara mandalo eo akaiky eo.
Kitapo izay tsy ilaina fa manampy sy mampitombo kokoa ny fahombiazan'ny fakantsary Netatmo Welcome.
Rehefa avy nandinika ny vahaolana vaovaon'ny mpanamboatra nandritra ny iray volana aho dia afaka milaza izany ny fakantsary Netatmo Welcome dia rafitra fanaraha-maso tena feno izany dia hihoatra ny fanantenan'ny mpampiasa rehetra.
Tonga lafatra ny logiciel misy anaoFampiharana finday miasa toy ny hatsarana miaraka amina safidy marobe, ary ny fahafaha-manara-maso ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny pejin-tranonkala, noho izany tsy miraharaha ny rafitra fiasa ampiasaina, manome lanja fanampiny ho an'ny vokatra iray izay nanaitra ahy izy ireo.
Te-hanasongadina andinindininy iray nanamarika ahy aho: ny fahatsapana filaminana. Toa hadalana izany, fa manana fakantsary fanaraha-maso video any an-trano, afaka manara-maso ny zava-mitranga amin'ny fotoana rehetra, mahafantatra hoe iza no miditra amin'ny tranoko Nanome fiadanan-tsaina fanampiny izay tsy nampoiziko nandritra ny famakafakana.
Mihevitra izany Tongasoa Netatmo izany Hita amin'ny Amazon amin'ny vidiny 187.76 Euros izy ioToa sarany mihoatra noho ny antonony aho raha jerena ireo tombony sy fahafaha-manao natolotry ity fakantsary fanaraha-maso ity. Raha ampianay izany ny 95.35 amin'ny Tags, manana a rafitra fanaraha-maso feno tsy latsaky ny 300 euro, vidiny mahaliana tokoa hidirana tanteraka amin'ny tontolon'ny automation an-trano.
Ny interface interface dia tena feno
Ny rafitry ny fahitany amin'ny alina dia manana kalitao tsy mahagaga
Raha tsy mila tariby hamelomana azy dia tonga lafatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Netatmo Tongasoa, izahay dia mamakafaka ny fakantsary fanaraha-maso izay manaiky ny tavanao